Sarintany amin'ny ambaratongam-paritra | Fiaretana haran-dranomasina
Ny haran-dranomasina dia samy hafa be amin'ny faritra iray. Ny haran-dranomasina any Karaiba dia hanana haran-dranomasina, ahidrano na ahidrano maro karazana, fiasa ekolojika ary fifandraisana amin'ny toeram-ponenana noho ny vatohara any Maldives na any Indonezia. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa eo an-toerana, ny Atlas dia mitazona haran-dranomasina an-toerana izay manome sokajy misimisy kokoa mifanaraka amin'ny fonenana sy ny filan'ny mpitantana.
Raha ny momba an'i Karaiba atsimo (The Bahamas, the Greater Antilles, and the Lesser Antilles), The Nature Conservancy dia niara-niasa tamin'ny Atlas, Vulcan, Planet, ary Arizona State University (ASU) mba hamolavola andiana vahaolana avo lenta ( 4 m) sarintany benthic namboarina ho an'ny takelaka haran-dranomasina izay taratry ny mampiavaka ny faritra. Ireo sarintany ireo dia novolavolaina mba hanomezana angon-drakitra spatial tsy manam-paharoa sy mitovy amin'ny sehatra isam-paritra sy nasionaly.
Ny Maps Caribbean Benthic Habitat Maps dia mandray anjara amin'ny tetik'asa fiarovana sy fikarohana, ao anatin'izany ny drafitry ny habakabaka an-dranomasina, ny maodelin'ny serivisy momba ny tontolo iainana, ny fampifanarahana mifototra amin'ny tontolo iainana ary ny hetsika karbaona manga. Mianara bebe kokoa momba ireo tetikasa ireo ao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAtlas momba ny siansa Karaiba.
Dian-tongotry ny sari tanin'n'ny Karaiba Fambolena Coral Reef. Bola: The Conservancy voajanahary
Ny Sarintanin'ny Caribbean Benthic Habitat dia miorina amin'ny sary zanabolana avo lenta avy amin'ny antokon-kintana PlanetScope SmallSat. Mba hanasokajiana ny sary zanabolana sy hamoronana sarintany haran-dranomasina benthic, ny TNC dia namolavola tetika fanasokajiana miavaka natokana ho an'i Karaiba.
Jereo sy ampiasao ireo sari-tany amin'ny tranokala Caribbean Caribbean Maps: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSarintany misy sary zanabolana.
Lahatsary fohy dia mampiseho ny fomba fitetezana mankany amin'ny Sarintany Karazana Benthic Habitat any Karaiba sy ny fampiasana ny fitaovana fanaovana sarintany an-tserasera hizaha azy ireo.